» कति जनसङ्ख्या छ ? उपमहानगरपालिकासँग छैन तथ्याङ्क
कति जनसङ्ख्या छ ? उपमहानगरपालिकासँग छैन तथ्याङ्क
२७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ११:२९ प्रकाशित
बाँके – बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग नगर क्षेत्रमा कति घर छन् ? कस्ता छन् ? जनसङ्ख्या कति छ ? ठ्याक्कै तथ्याङ्क छैन । वडा कार्यालयसँग रहेका वर्षौँ पुराना ‘रफ रेकर्ड’लाई आधार बनाएर उपमहानगरपालिकाले मागेको अवस्थामा काम चलाउ तथ्याङ्क दिने गरेको छ ।
घर र जनसङ्ख्याको यकिन तथ्याङ्क नै नराख्ने नगरले के आधारमा उनीहरुलाई सेवा देला ? कसरी विकास गर्ला ? घरैघरले ढाकेको नेपालगञ्जमा कति घर होलान् ? कति मान्छे बस्छन् होला ? यो प्रश्नको जवाफ पाउन करिब मुस्किल रहेको बताए नेपालगञ्ज–१९ का प्रदीपकुमार शर्मा । उनले भने, “यसको रेकर्ड कसैसँग छैन, रेकर्ड राख्नुपर्ने उपमहानगरपालिकाले हो, तर राखेको छैन ।”
यस प्रणालीमा उपमहानगरपालिकाका मुख्य सडकमा कोडिङ गरिनुपर्छ । कोडिङपछि ती सडकको एउटा भगामा प्रवेशविन्दु र अन्तिम विन्दु लिइने गरिन्छ । प्रवेश विन्दुबाट प्रत्येक घरको मूलढोकासम्मको दूरी मिटरमा नापिएको नम्बर नै उक्त घरको नम्बर मानिने कार्कीले बताए । उपमहानगरपालिकालाई आधुनिक प्रविधिको शहरी नक्सामा लैजानेबारे उपमहानगरपालिका मौन छ ।
उपमहनागरपालिकामा रहेका कुनै पनि घरको नम्बरिङ नगरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले बताए । उनका अनुसार उपमहानगरका घरलाई अब मेट्रिक प्रणालीमा लिएर घर नम्बर गर्न आवश्यक छ । तर उपमहानगरपालिकाले यो काम अघि बढाउन चासो देखाएको छैन । उपमहानगरपालिकाको भौगोलिक सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दै जीआइएसका आधारमा घर नम्बरिङ गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विवरणलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत अध्यावधिक गर्दै घरमा नम्बर टाँसेको अवस्थामा कुन घर कुन रोडको कति नम्बरमा पर्छ भन्ने सहजै जानकारी हुनेछ । डिजिटल नम्बरिङपछि बारूणयन्त्र, एम्बुलेन्स, सुरक्षा व्यवस्थापनका काममा सहज हुने र पाहुनाले समेत गुगलम्यापबाट घर पत्ता लगाउन सक्ने गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको विकास गर्न सबै स्थानीय तहले आवश्यक पहल लिनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । रासस